Warshad hadiyad Bath Set - Shiinaha Bath Set Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Qubeyska & Jirka
Qiyaasta Hadiyada Bath
Looshinka jirka & kareemka gacanta
Saabuun Gacmeedka xumbaynaya
Bambaanada Bath & Fizzer
100% Shumaca Soy Waxyaabaha Saafi ah
Waxyaabaha Jeermiska lagu dilo
Nadiifiyaha Gacanta ee Alkolo
Maaskarada wajiga & Maaskaro Cagta & Maaskaro gacanta
Hadiyadaha Badeecada & Iskudhafka ...
Basbaaska Hadiyadaha Guryaha - ...
Spa Bath Hadiyad Basket Set La ...
Dhaqida Jirka Dabiiciga ah iyo Showe ...
Qubeyska iyo Shaqada Jirka Pink Ro ...
Dambiisha Hoyga Hadiyadaha ee Hoyga - Raaxo 7 Qubeys Qubeysan & Jidh loogu talagalay Haweenka
Macluumaadka Badeecada Si qurux badan loo soo baakadeeyay oo loo soo bandhigay cadarkan xidhmadan hadiyadaha qubeyska ah waxay ka dhigaysaa hadiyad aan caadi ahayn dumarka! Hadiyad kasta waxaa lagu farsameeyaa fiiro gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta waxaana ku jira farriin hadiyad shaqsiyeed si ay u gudbiso rabitaankaaga ugu fiican. 1.SCENT: Udgoonka Ubax Biyoodka caraf jacayl ah ee ubaxa ubaxa. Ubaxyada duurjoogta ahi waxay abuuraan bouquet isku dheelitiran. 2. HADIYADDA HADA EE HESHIIS AH OO DHAMMAN Waxay ka kooban tahay 300ml jel qubeys ah, 240ml oo ceeryaamo jirka ah, 150ml jirka oo la xoqo, looshin jirka oo dhan 220ml, cusbo 100g ah oo lagu maydho, Ubax Bath p ...
Hadiyada Bath & Shower Spa Basket Hadiyad Hadh Deji Liinta Qarsoon Bath Set
Macluumaadka BILAASHKA HADIYADDA HORE "Habka wax loo bixiyo ayaa ka qiimo badan hadiyadda" Taasi waa sababta aan u abuurnay xirmooyinka isboortiga ee ugu quruxda badan uguna caansan ee ku jira baakadaha hadiyadeed ee xarrago leh taas oo ka dhigaysa in dambiilayaasheena dambiisha ay ka kooban yihiin fikradaha hadiyadda No .1 ee xaaska, hooyada, iyo saaxiibbada. 1.SCENT: Liin macaan Cusub Udgoon Liin dhanaan ah- Sida casri casri ah, udgoonkeena liinku waa fudeyd iyo raaxo. Udgoon udgoon ee liin dhanaanta waa mid waara oo waxaa hubaal ah inuu ku siin doono nasashada aad ugu baahan tahay ee aad u xiiseyneysay ...
Spa Luxetique Spa Hadiyad Set Basket
Macluumaadka Badeecadeena Hadiyadeena xiisaha badan ee qubeyska iyo jilicsanaanta qubeyska iyo alaabada jirka waxay gacan ka geysaneysaa dib u cusbooneysiinta muruqyada daalan iyo kala-goysyada adag, maqaarka jilicsan iyo kan cusub ee waayo-aragnimada qubeyska raaxada leh. 1.SCENT: Violet & Sophora Flower let let let let let â is š Violet Vio Vio â Vio Vio Vio Vio let let let Violet & Sophora Flower urka waxaa loogu talagalay in lagu quudiyo maqaarka iyadoo maskaxda lagu nasinayo Qalabkan raaxada ahi wuxuu hadiyado kaamil ah ka dhigayaa xaaskaaga, saaxiibtiis, hooyadaa, gabadha aad abti u tahay ama xitaa ayeeyadaa munaasibad kasta oo hadiyad ah. 2. SPA Set waxaa ku jira 300ml gel gel 2 ...
Bacda Nasashada Udugga ee Guryaha ee Loogu Tala Galay Naagteeda Rose Udgoon
Macluumaadka Badeecada Kadib markaad ku qubeysatid ama aad ku qubeysatid nasasho dheer oo leh hadiyaddan koolkoolinta, ha ilaawin inaad maqaarkaaga ku qoydo kareemka jirka. Na aamin, maqaarkaagu wuxuu eegi doonaa oo dareemi doonaa qabow iyo caafimaad! 1.SCENT: Udgoon Rose Udgoonka Rose ayaa la isku daray si loo abuuro caraf qurux badan oo hodan ah. Bacda qurxinta SPA Set waxaa ku jira 120ml qubeyska gel 120ml qubeyska xumbo 110ml jirka looska 100g milix cusbo 15g qubeyska bacaha qurxinta 3.Product wuxuu isticmaalaa jelka qubeyska - LATHER AND ...
Bath Spa Gift Box For Women - Qubeys Qurux Badan Iyo Jirka Deji
Macluumaadka Badeecadayada Baakadeynta sare iyo quruxda badani waxay ku habboon tahay hadiyad ahaan ama inaad ku qanacsan tahay naftaada. Fasax caan ah, dhalasho, sanad-guuro, hadiyad mahadnaq naftaada ama qof aad jeceshahay wakhti kasta oo sanadka ka mid ah! 1.CENT eony & Blush Suede Udgoonka Nuxurka soo jiidashada. Peonies ee ubaxyada iskood u jilicsan, oo ku dhex milma dareenka jilicsanaanta, jilicsanaanta suede. Gaar ah oo raaxo leh. 2.8 PCS Set Home HBS waxay ka kooban tahay 210ml gel gel 210ml qubeyska xumbo ah 80ml kareem jirka 80ml jirka xoq 100g qubeyska ...
Qubeyska iyo Shaqooyinka Jidhka oo loo dhigay Udgoon Ubax Haweenka
Macluumaadka Badeecada Jabka jirkaaga adoo adeegsanaya daaweyn hudheel ah oo guriga lagu raaxeysto! Si qurux badan ayaa loogu soo raray baakad qurux badan oo loo yaqaan 'COSMETIC BAG' oo leh 'HANDLE' oo kaydin karta dhammaan qalabkaaga quruxda badan, hadiyaddan qubayska qubaysku waxay ka dhigaysaa hadiyad aan caadi ahayn waxayna ku dareysaa taabasho qurux badan musqusha. 1.CARTA: Udgoonka Rose The nasashada kama dambaysta ah ee lagu dejiyey caraf udgoon maskaxda iyo jidhka. Haddii aad cagahaaga qoysay ama aad isticmaaleysid cusbadayada qubeyska leh ee nasashada, hubi inaad ku dhameysatid jirkeena aadka u fudud laakiin fuuq-celinta jirka ...
Qubeyska iyo Dambiisha Hadiyadaha Jirka ee Haweenka iyo Ragga
Macluumaadka Badeecada Alaabtan quruxda badan ee hodanka ah waxaa lagu sameeyay subag Shea ah iyo nafaqo fiitamiin E. Waxay ku badbaadaan xitaa maqaarka xasaasiga ah! Waxaan kalsooni ku qabnaa inaad jaceyl u qaadi doontid quruxdeena. Baasaboorka oo ku raaxee marwada gaarka ah ama ninka noloshaada adigoo wata xirmo hadiyado qurux badan oo qurux badan. Waxay ka dhigtaa hadiyad cajiiba Maalinta dhalashada, Ciidaha, Kirismaska, Sannad-guurada, Maalinta Hooyada iyo Maalinta Jacaylka. U keen dhoola cadeyn Gabadhaada, Xaaskaaga, Hooyadaada, Gabadhaada. 1 ....
Qubeyska raaxada & Jidhka loogu talagalay Haweenka iyo Ragga
BARNAAMIJKA: MALUUQA & ALMOND Udgoonka udgoon ee udgoon ee Malabka & Yicibta ayaa kuu qaadi doona janno suud ah! Udgoonkan udgoon waxaa lagu soo rogay qoraalo qani ku ah, subag waxayna cadeynayaan muuqaalka diirran ee la dubay maalinta barafka. Jirkaaga ha u qoyso wanaagga inta aad maqaarkaaga ku xoqeyso alaabada qubeyska ugu fiican. Si qurux badan ayaa loogu duuduubay dambiil xarrago leh oo tolmo leh, hadiyaddan qubayska ayaa hadiyad aan caadi ahayn ka dhigaysa, waxayna ku dareysaa taabasho qurux badan musqusha. Waxay ka kooban tahay Gel Maydho (...
Spa Bath Hadiyad Basket Set Lavender
BARNAAMIJKA: ve La ve La La La La ve ve ve ve ve ve La La La your your Jirkaaga ha ku qoydo wanaagga intaad maqaarkaaga ku xoqeyso alaabada qubeyska ugu fiican. DHAMMAAN HADA SIYAASADDA AH Waxay ka kooban tahay saliid qubeys ah 180ml, 180mm qubeyska xumbo, 50ml subagga jirka, 30ml saliid qubays, 100g cusbo qubeys ah, 100g bambo qubeys ah, 120g saabuun qubeyska, loofah gadaal xoqe, iyo dambiil gacmeed tolmo leh oo lagu qurxiyo ama lagu keydiyo. HADIYADDA AQOONSIGA “Qaabka wax loo bixiyo ayaa ka qiimo badan hadiyadda” Taasi waa sababta aan ugu abuurnay xirmooyinka dalxiis ee ugu quruxda badan uguna sarreysa ee elega ...
Nasashada Hadiyada Qubayska ee Loogu Talo Galay Maalinta Hooyooyinka Fikradaha Hadiyadaha Fasaxa Dhalashada ee Hooyo
BADBAADO: Rummaanka Rummaanka wuxuu ka codsanayaa haweeney kasta, isagoo ka dhigaya hadiyad kaamil ah! Qalabkan raaxada ahi wuxuu leeyahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u koolkooliso naftaada ama qof aad jeceshahay. SET DHAMMAAN SET wuxuu kakooban yahay 260ml jel qubeys ah, 260ml qubeyska xumbada, kareemka jirka oo dhan 220ml, 80g fiyuus, 100g cusbo ah, burush alwaax ah, dambiil bir ah. Ma jirto hab ka wanaagsan oo lagu qanci karo haweeney marka loo eego hadiyadaha loogu talagalay munaasabadaha gaarka ah. Maalinta Jacaylka, Maalinta Hooyooyinka, Maalinta Kirismaska, Hadiyadaha fasaxa, haddiyadaha sanad-guurada, mahadhooyinka mahadsanid, Pa ...
Cinwaanka: Lam. 3561, Wadada Min'an, Degmada Xiang'an, Magaalada Xiamen, Gobolka Fujian, Shiinaha